မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မူဝါဒ
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:17 AM
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ ကြီးများမှ ထုတ်ပေးမယ့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရဲ. ၉၉%ကို တရုတ်က၀ယ်ယူမယ်။
မြန်မာက ၁% သာဝယ်ခွင့်ရပါမယ်။
တရုတ်ကပဲ ၇၀% ယူမယ်...။
မြန်မာပြည်က ၂၀% (သန်း၅၀၀)သာ ရပါမယ်။
ကျန်တဲ့ ၁၀% ကိုတော့ ပွဲစါးဖြစ်တဲ့ Asia World + (ဗိုလ်ချုပ်အချို.အပါအဝင်)+ အခြားပညာရှင် အဖွဲ.များက ရပါမယ်။
(၂) ရွာတွေယာတွေကို ဆုံးရှုံးစွန်.ခွာ ခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေ
(၃) မြစ်ကြီးကို မှီခိုစါးသောက် အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း ပြုနေရတဲ့ ပြည်သူ ၆၀% ခန်.နှင့်
(၄)ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် (မြန်မာ့စပါးကျီကြီး)ကို မှီခိုရသူတွေ အတွက်တော့
ခုရမယ့် အကျိုးအမြတ်ဟာ စွန်.လွှတ်
ပေးဆပ်လိုက်ရတာ ဘ၀ပျက်စီးသွားရတာတွေ နဲ. မကာမိအောင် အလွန်.အလွန်ကို နည်းပါးလွန်းတာ တွေ.ရပါလိမ်.မယ်။
ဒါ့အပြင် အလွန်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတာက
မြစ်ဆုံ ရေကာတာတွေဟာ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ တိတိကျကျ သတိပေးချက်အရ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ.ကြော ဇုံကြီး နှင့် အလွန်နီးကပ်နေတဲ့အတွက် တနည်းအားဖြင့် ငလျင်ကြောကြီးပေါ် ကျရောက် နေပါတယ်။ ငလျင်ကြောင့် ရေကာတာကြီးများ ကျိုးပေါက် သွားလို.ကတော့ မြစ်ကြီးနားမြို.
အပါအ၀င် မြစ်အောက်ပိုင်းက မြို.တွေ ရွာတွေအတွက် မတွေးဝန်.စရာ အနျွရာယ် ကြီးမားလှပါတယ် ။
ဧရာဝတီမြစ် ကယ်တင်ရေး ဆွေးနွေးခဏ်းကို နားဆင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါ...
စစ်အစိုးရ/အစိုးရသစ်ကို ဝေဖန်ရှုံ.ချလိုလို. နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုလို. ပြောနေတာမဟုတ်ပါ တရုတ်ပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် လေ့လာထားတဲ့ စါမျက်နှာ ၉၀၀ ပါ အစီရင်ခံစါမှ
ပြည်သူများစွာရဲ. အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များ အတွက် အနျွှရာယ်အကြီးအကျယ် ရှိနိုင်လို. တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုး အတွက်ပြောနေတာပါ ... တာဝန်ရှိသူများက အကြိမ်ကြိမ် စုံစမ်းစစ်ဆေး ချင့်ချိန်စဉ်းစါး တိုင်ပင် ပြီးမှ လုပ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက် ပါသည်။
Fuck u author of this article . Is china ur mother fucker ?
မငိုပါနဲ. ဧရာဝတီ ... http://www.ainchannmyay.com/?p=1190
အထက်ပါ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးတော့ သဘောထားပေးကြပါ။
ညီမရဲ့ photo story လေးက ဧရာဝတီဟာ ဆည်ဆောက်ပြီး ပိုတောင် ရေစီးသန်လာ ဦးတော့မှာလိုလို ပြောနေသူတွေကို ပုံနဲ့တကွ ငြင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် တိုင်းပြည်နစ်မွန်းတော့မဲ့ အန္တရာယ်ကို အဲဒီ နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်စီကသာ သိနေကြရင် အဲဒီ တိုင်းပြည် မနစ်မွန်းနိုင်လောက်ပါဘူး။
အခုလည်း အကိုတို့ သာမန် နိုင်ငံသားတွေမှာ အဲဒီ awareness to danger ရှိနေကြလို့ နောက်ဆုံးတော့ အကိုတို့နိုင်မှာပါ။ နိုင်အောင်လည်း မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရမှာပဲ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို မြန်မာအစိုးရက ဆက်လုပ် လို့ မြန်မာပြည်သူတွေ လမ်းမပေါ် ထွက်လာခဲ့ကြရင် ကျနော်လည်း ယခုရောက်နေတဲ့ နေရာ ကနေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်အောင် ပြန်သွားပြီး ဆန္ဒပြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ကြောင်း အခုကြုံလို့ ဒီနေရာကနေပြီး လူသိရှင်ကြား ကြေညာအပ်ပါတယ်။
Comment by ပြည်ကောင်းအောင် — August 16, 2011 @ 1:02 pm
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ ကြီးများမှ (အများအကျိုးအတွက် ) ထုတ်ပေးမယ့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရဲ. ၉၉%ကို တရုတ်က၀ယ်ယူမယ်။
အဲလို ရောင်းလို.ရတဲ့ ဝင်ငွေကိုလဲ
မြန်မာပြည်က ၂၀% သာရပါမယ်။
((ကျန်တဲ့ ၁၀% ကိုတော့ ပွဲစါးဖြစ်တဲ့ Asia World + (ဗိုလ်ချုပ်အချို.အပါအဝင်) အခြားပညာရှင် အဖွဲ.များကရပါမယ်။))
(၂) ရွာတွေ မြေယာတွေကို စွန်.ခွာဆုံးရှုံး ခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေ...
(၃)ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးကို ဘိုးဘွားဘီဘင် လက်ထက်ကထည်းက မှီခို အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း ပြုနေရတဲ့ ပြည်သူ ၆၀% ခန်.နှင့်..
(၄)ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် (မြန်မာ့စပါးကျီကြီး) ကိုမှီခို အသက်ဆက်ရသူတွေ.....
အတွက်တော့ ရမယ့် အကျိုးအမြတ်ဟာစွန်.လွှတ်
နဲ. မကာမိအောင် အလွန်.အလွန်ကို နည်းပါးလွန်းတာ တွေ.ရပါလိမ်.မယ်။
မြစ်ဆုံ ရေကာတာကြီးများဟာ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ တိတိကျကျ သတိပေးချက်အရ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ.ကြောဇုံကြီး (Sagaing Fault System) နှင့် အလွန်နီးကပ်နေတဲ့အတွက် တနည်းအားဖြင့် ငလျင်ကြောကြီးပေါ် ကျရောက်နေပါတယ်။ ငလျင်ကြောင့် ရေကာတာကြီးများ ကျိုးပေါက် သွားလို. ကတော့ မြစ်ကြီးနားမြို.
အပါအ၀င် မြစ်အောက်ပိုင်းက မြို.တွေ ရွာတွေ ပြည်သူတွေအတွက် မတွေးဝန်.စရာ အနျွရာယ် ကြီးမားလှပါတယ် ။
ဒါတွေဟာ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုလို. စစ်အစိုးရ/အစိုးရသစ်ကို ဝေဖန်ဆန်.ကျင်လိုလို.
ပြောနေတာမဟုတ်ပါ။ ဒီအချက်တွေဟာ တရုတ်ပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် လေ့လာတွေ.ရှိ ထားတဲ့ စါမျက်နှာ ၉၀၀ ပါ အစီရင်ခံစါမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
(( ဧရာဝတီမြစ် ကယ်တင်ရေး ဆွေးနွေးခဏ်းကို နားဆင်ရန်...
မငိုပါနဲ့ ဧရာဝတီ .. မျက်မြင်သက်သေ.. http://www.ainchannmyay.com/?p=1190 ))
ပြည်သူများစွာရဲ. အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များ အတွက် အနျွှရာယ်အကြီးအကျယ် ရှိနိုင်လို. တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုး အတွက်ပြောနေတာပါ။ တာဝန်ရှိသူများက ပညာရှင်များ၏ အကြံဥာဏ်ကိုယူ အကြိမ်ကြိမ် စုံစမ်းစစ်ဆေး ချင့်ချိန်စဉ်းစါးကာ အမှန်တရားတွေကို ဖုံးကွယ်မထားပဲ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ပြီး ဆောက်သင့်မှ ဆောက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက် ပါသည်။
((ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ ကြီးများမှ "အများအကျိုးအတွက်" ထုတ်ပေးမယ့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရဲ. ၉၉%ကို တရုတ်က၀ယ်ယူမယ်။
မြန်မာပြည်က ၂၀% သာရပါမယ်။))
လျှပ်စစ်မီး တစ်ပွင့်ရဖို.အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ပေးဆပ်ရသလဲဆိုတာ ကိုဆိုလို ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာ့ကမ်းလွန်က သဘာဝဓါတ်ငွေ.များဟာဖြင့် (နျူကလီယား လောင်စါပြီးရင်) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရာမှာ အကောင်းဆုံး၊ ပါတ်ဝန်းကျင် အသန်.ရှင်းဆုံး လောင်စါ Fuel ဖြစ်ပါတယ်-
ဒီ မြန်မာ့ကမ်းလွန် ဓါတ်ငွေ့တွေလဲ
" မြန်မာပြည်သူများအကျိုး" အတွက်သုံးခွင့်မရ တရုတ် နှင်. ယိုးဒယားကိုသာ အားလုံးနီးပါး ရောင်းနေတာတွေ.ရပါတယ်။
ပြည်.စုံတဲ့ သုံးသတ်ချက် သတင်းအချက်အလက် အမှန်တွေကို မြန်မာပြည်တွင်း သတင်းစါတွေထဲ တခါမျှ မဖတ်ကြရပါ။
ယခုလို အမှန်တရားကို ပြည်သူများ အပြည့်အစုံ မသိရ ထိန်ချန်ထားကြမယ် ဆိုရင်တော့
ရှေ.ဆက် ဦးကျော်ဆန်း လိုပဲ (ပြည်သူအားလုံး) မချိတင်ကဲ ငိုကြရလိမ့်အုံးမယ်... မကြာတော့ပါဘူး။